Maxaa lagu cunaa Bari | Safarka Absolut
Maxaa lagu cunaa Bari
maruuzen | | La cusboonaysiiyay 15/04/2021 11:42 | Italia
Mid ka mid ah cunnooyinka ugu caansan adduunka waa Talyaani, markaa safar ahaan waa wax aan macquul aheyn in lagu daro dhowr kiilo. Markaan aadno koonfurta waxaan la kulanaynaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan uguna dalxiiska badan, Bari, sidaa darteed maanta waxaan wax ka baran doonnaa waxa lagu cuno Bari.
Runtu waxay tahay in cunnooyinka talyaanigu ay heleen oo ay wali helayaan saamaynta jikooyinka deriskeeda deriska ah, sidaa darteed halka woqooyiga ay leedahay xoogaa cunno Faransiis ah, dhanka koonfureed weelladoodu waxay ka badan yihiin badda Mediterranean, kalluun, saliid saytuun iyo yaanyo. Marka, qor macluumaadkan si aad ugu raaxeysato cunista Bari.
1 Cunnada Bari
2 Baastada duban
3 Kalluunka qaydhin
4 rooti fidsan
7 Baradhadu, bariis iyo moos
10 Faras goos
12 Kareemka jalaatada
Bari waa magaalo caan ah oo Talyaani ah, kuna taal inta udhaxeysa Naples iyo Palermo, xeebta quruxda badan Badda Adriatic. Waxay leedahay qalcado qadiimiya, dhaxal Roman, qasriyo iyo tiyaatarro, sidaa darteed nolosha dhaqanku waxay u xiiso badan tahay tan gastronomic.
Xeebta badda Mediterranean waa tan bixisa aasaaska cunnadeeda, taas oo ah, kalluun kala duwan, octopuses had iyo jeer cusub, badda urchins oo dhadhan fiican leh muuska. Waxaa jira kalluun iyo kalluun qolofle ah oo cuno cayriin, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwo kale oo la cuno iyadoo la kariyey. Kooxdan ugu dambeysa gal aargoosatada, clams iyo prawn. Isugeynta ugu caansan waa baastada lagu qasay khudaarta maxalliga ah iyo suugada si wanaagsan loo kariyey.
Dhulalka ku xeeran Bari waxay caan ku yihiin tayada saliida saytuunka, laakiin sidoo kale by ah toontaah khudradda cusub, cilantro, las chicory, aubergines, digir ballaaran iyo digaag. Dhammaan wadajirka ayaa la isku daraa, tusaale ahaan, kuwa caanka ah maraq minestrone.
Laakiin ogaanshaha maaddooyinkaan aasaasiga ah, aan hadda ka hadalno suxuunta ugu caansan ee cunnada Bari, sidaa darteed waxaan bilaabi karnaa inaan isku dubbarno liistada waxa lagu cuno Bari.
Es baastada la dubay. Waxaa lagu diyaarin jiray bilowga Soonka, hilibka doofaarka iyo ukunta ama sida saxanka axada oo kale, laakiin maanta waa la cuni karaa wakhti kasta oo ka mid ah usbuuca mar walbana wuxuu ku jiraa liiska maqaayadaha.
Baastada guud ahaan, Bari baastada waxaa loo sameeyaa qaab fudud, oo leh biyo, bur iyo cusbo, waxayna ku taal salka suxuunta badan. Nooca caadiga ah waa orecchiette, kaas oo qaabeeya gacanta, ama cavatelli iyo fricelli loo sameeyay inay si fiican u nuugaan suugada, had iyo jeer laga sameeyo khudradda, hilibka ama kalluunka.
Xagga sare waxaan dhahnay xeebta Mediterranean waxay siisaa kalluunka iyo cunnada badda cunnada Bari, marna kuwani waa la cunaa iyadoo la kariyey marna cayriin. Kalluunka ceyriin maahan wax ay ikhtiraaceen Jabaanku halkaana dadku waxay ugu haystaan ​​inay tahay cunug sidoo kale. Waxaa loo cunaa sidii aperitif ama cunto fudud oo deg deg ah si toos ah uga iibsaday kalluumeysatada.
Kalluunka, laakiin sidoo kale baqtiga, clams, lobster ... iyo haa, liin dhanaan la'aan, sidaa darteed waa inaad ku faraxdaa dhadhanka ugu adag ee badda, iyada oo aan lahayn shaandho.
Halkan focaccia kaliya maahan cuntada waddo fudud, waxay ku dhowdahay waaya aragnimo diineed, ayay yiraahdeen. Saxankani wuxuu isku daraa kan bur, biyo, cusbo, saliid iyo khamiir, iyo yaanyada, saytuunka, dhirta iyo mararka qaarkood baradhada ayaa lagu daraa. Nooca leh baradho casaan ah oo isku daboolaya sida yaanyada cusub waa dhadhan fiican.
Focaccia waxay noqon kartaa saxanka ugu weyn ama cunto fudud, laakiin waxaad ka heli doontaa dhammaan dukaamada keega ee magaalada ku yaal. Raaxo fiican waa Fiore Bakery, oo ku taal luuq aad u qurux badan oo dhawr tallaabo u jirta Kaniisadda San Nicola iyo Kaniisadda San Sabino.
Waa xubin dhaqameed reer Bari ah taas wuxuu joogaa jikooyinka oo dhans. Waxaan ka hadlayaa sgagliozze, boorashka hadhuudhka, polenta, kaas oo la siiyay qaab laba jibbaaran, ayaa loo jarjarey xaleefyo waxaana lagu dhex galiyay saliid kulul. Natiijadu waa cajiin cusbo, dahab iyo aad u dhadhan fiican leh oo ay dadka deegaanku si weyn u cunaan.
Mid ka mid ah cunto kariyeyaasha sgagliozze ee ugu caansan Bari waa Maria de Sgagliozze. Maanta waa inay ka weyn tahay 90 sano, haddii ay weli nooshahay, laakiin waxay badanaa ku karisaa albaabkeeda oo ku iibisaa inta u dhexeysa 1 iyo 3 euro. Isagu waa halyeey ku nool arrimaha cuntada dariiqa ee Bari.
Waa wax caadi ah in la helo saaxiibo wakhti kasta oo sanadka ka mid ah. Sida dhaqanku sheegayo faahfaahinteeda waxay muujineysaa in qoyska oo dhami ay kaqeybqaataan, miiska hareerihiisa, dhammaantoodna samee cajiinka. Intaas ka dib lagu buuxiyo mozzarella iyo yaanyo, xir oo shiil.
In Bari waxaa jira noocyo badan oo noocan ah, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa ah hilib lagu buuxiyey ama nabMareykanka cuntada Waa meel wanaagsan oo laga iibsado panzerottis wanaagsan oo la cuno intaad ku dhex socoto darbiyada qarniyadii dhexe, Muraglia.
Baradhadu, bariis iyo moos
Koorso koowaad oo heer sare ah oo ka socota cunnada Bari. Gudaha wax soo saarka dhulka iyo baddaba si heer sare ah ayaa la isugu dhafan yahay. Qiyaas intee le'eg ayay leeyihiin walxo kasta? Qofna ma dhihi karo hubaal waana isha iyo waaya aragnimada karinta, kaliya sidan oo kale ayaa lagu gaaraa isku dheelitirka, isku dheelitirka saxda ah.
Sida iska cad, waa ayeeyooyinka ama hooyooyinka leh sixirkaas reer kasta.
Waxaan ugu magac darnay gudbinta markaan ka hadlayno baastada Bari. Waa baastada ugu caansan Bari waxaana la yiraahdaa sidaas ayaa loogu yeeraa maxaa yeelay waxay u egtahay dhag yar. Hareeraha halkan ayay sidoo kale ugu yeeraan iyada xarago.
Xagee ka cuni kartaa Meel kasta, laakiin tusaale ahaan, ka hor Castello Svevo, oo ku taal magaalada qadiimiga ah ee Bari, waxaad ku arki doontaa waddo ay la socdaan dumar badan oo duug ah oo iibinaya macdanta guryaha lagu sameeyo. Waxaad arki kartaa sida ay u sameeyaan xilligan oo ay saxanka u diyaariyaan si hagar la’aan ah. Sida iska cad, soco kahor intaadan iibsan. Qiimaha wuu ku kala duwan yahay hadba noocyada badarka, laakiin xisaab inta udhaxeysa 5 ilaa 8 euro.
Macmacaanka ugu horreeya ee liiskayaga. Waxay ku saabsan tahay a postra lagu sameeyay cajiinka filo, oo kareem laga buuxiyay laguna daboolay sonkorta shiidan. Aad u macaan.
Ciidaha ama Axadaha waxaa caadi ah in la isugu yimaado qado iyo saxan had iyo jeer ka muuqata miiska waa fardaha loo jaro, runti duub hilib dhexdhexaad ah ama weyn, cusbaynayaa a ragout, lagu buuxiyay jiis caciocavallo iyo subagga doofaarka.
Waa a cuntada caadiga ah ee jidadka oo macaan. Waxaa sidoo kale loo yaqaan tufaax Waxaana maalin walba u diyaariya haweeneyda guryaha leh geesaha jidadka waaweyn ee Magaalada Old Bari. Gudaha Piazza Mercantile waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican.
Dadweynaha popizze waxay la socdaan sgaliozze, iyadoon lahayn polenta.
Ma iloobi karno astaamo Talyaani ah oo leh noocyadeeda farsamo ee Bari. Nooc dhadhan fiican ayaa ah biriij buuxiyey jalaatada iyo meel fiican oo la isku dayo waa Gelateria Gentile, oo miisaskeeda saaran waddada iyo goobteeda weyn ee Castello Normanno - Sevevo, oo ay ku jirto dhalashada Byzantine.
Ugu dambayntii, sidaad u garatay waxaa jira cunnooyin badan oo waddooyinka yaalla inaad si fudud wax u cuni karto adigoo fadhiya fadhi ama barxad ka baxsan meheradda. Bari waa sidaas. Dabcan waad aadi kartaa makhaayadaha iyo baararka (makhaayadaha qoysaska iyo baararka sida caadiga ah waxay qaataan lacagta oo keliya, markaa maskaxda ku hay), laakiin haddii ay jiraan wax si weyn loogu taliyay magaaladan Talyaaniga, waa si sax soco, soco, lumiso jidadkeeda kadib udgoonka iyo dhadhanka dhadhanka.
Waa iyada oo albaab kasta ama daaqad kasta ama luuqyada ka dambeeya, jikooyinka had iyo jeer mashquulka ku ah la qariyo. Subaxdii iyo galabtii waxaad arkeysaa dad sheekaysanaya, wada sheekaysanaya, waana wax fiican.
GastronomyMakhaayadaha iyo baararka
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Maxaa lagu cunaa Bari
Ma jeceshahay quusitaanka waan jeclahay dhunkasho
Jidhka kaamil ah, Quruxda Griiga Qadiimiga ah
Cayaaraha caanka ah ee England